Sayensị nke Voice over | Martech Zone
Mgbe ị na-achọ ịrụ ọrụ na a olu n'elu omenka maka ijide ozi, nkọwa video, azụmahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla chọrọ onye edemede nwere ahụmahụ, ọ dị mkpa ịhọrọ onye nwere ikike zuru oke maka mkpa gị. Ikwu okwu nke ọma abụghị naanị onye na-ekwu okwu ụfọdụ mgbe ị kwuchara, i nwere ike ime ya n'onwe gị! Iji olu nwere nka na nka mara ihe ese ihe di nkpa maka izi ozi gi n’ụzọ ziri ezi.
Zọ kachasị mma, n'echiche m, ịchọta olu ahụ zuru oke na onye na-ese ihe bụ site na ezigbo Google - ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla ị na-eji! Ebe ọtụtụ ndị ọkachamara nwere ụlọ ọrụ nke aka ha, ọ bụghị naanị ịchọta olu onye na-ese ihe na mpaghara gị, yabụ ị nwere ike chọọ ruo mgbe ịchọtara ihe zuru oke maka akara gị. Mgbe ị na-eme mkpebi ahụ, otu olu na ebe nrụọrụ weebụ na-enye ọtụtụ ihe ọmụma iji nyere gị aka, site na akaebe na ihe atụ nke ọrụ ha. Ọ bụrụ na ha enweghị ihe nlele ọ bụla dabara na ihe ị na-achọ, atụla egwu ịbịakwute ma jụọ maka ihe nlere iji nye gị echiche karịa ma ọ bụrụ na ha dabara adaba. Imirikiti ndị na-ese ihe ga-enwe obi ụtọ ịmegharị akụkụ nke edemede gị!
Dị ka aha nke akwụkwọ ozi a gosiri, yana ị nwere nka ọkachamara olu n'elu, enwekwara sayensị na ya, ọ bụkwa ebe ezigbo ọkachamara ga-eme ka edemede gị na-enwu.
The nweta ikike, rhythmic ịrị elu na ọdịda nke okwu, nri na a olu n'elu bụ ihe na-esiri ike inweta ọgụgụ site na edemede, ọ gwụla ma onye na-agụ bụ ọkachamara. Ọ bụ ezie na anyị niile nwere mmụọ dị egwu ma na-asọ mgbe anyị na-agwa ibe anyị mkparịta ụka, tinye edemede n'ihu ọtụtụ mmadụ ma okwu ahụ ga-agbachi ma ghara ijikwa n'aka.
Olu na-aga nke ọma chọrọ ka ọ daa ụda ma bụrụ n'otu oge ahụ idebe ogologo ederede achọrọ. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ ga-eme ọsọ ọsọ site na edemede ahụ ma ọ bụ dochie okwu ha, ọkachamara olu karịa onye na-ese ihe nwere ahụmịhe na nka achọrọ iji gbanwee usoro okwu ha dabara nke ọma n'oge enyere.
The ụda olu eji na olu karịrị ka zuru okè dakọtara na ika, ngwaahịa na edemede, na ihe kasị mkpa, dakọtara na a eke ada n'ụzọ. Ma ọ dị oke njọ ma dịkwa jụụ maka ozi ejidere na ụlọ ọgwụ, mkparịta ụka na nwa okorobịa / nwa agbọghọ na-esote maka vidiyo na-akọwa azụmaahịa, siri ike na mgba ọkụ maka azụmaahịa ụgbọ ala, ma ọ bụ ụdị ụda olu ndị ọzọ a na-apụghị ịgụta ọnụ, ọ kwesịrị a na-achịkwa ya na arụmọrụ niile, nke anaghị adị mfe mgbe niile.
Olu ụda olu bụ akụkụ dị ukwuu nke igosipụta azụmaahịa gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nye ndị ahịa gị na ndị ahịa gị, nwee nsogbu ahụ, ọ nwere ike ịkọwa ọdachi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ewepụta ntụzịaka ntụsara ahụ na ụda olu gị na-ere ahịa ma sie ike, ọ nwere ike ị gaghị enwe ọtụtụ azụmahịa azụmaahịa!
mgbe olu bụ ihe nwere ike, n'ezie, gbanwee na post-mmepụta, ọ ka bụ ihe kwesịrị ịbịaru nso dị ka o kwere omume izu oke n'oge ndekọ olu ahụ. Olu dị mkpa ka ọ dị elu nke na okwu ọ bụla na nuance na-atụtụ ya site na mic, mana ọ bụghị oke olu na onye ọ bụla na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị emechara emechara ntị ha! Ọ ga-agbanwe agbanwe n'oge niile, ebe ọ na-ada ụda n'ụzọ zuru oke. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnwa ọtụtụ mmadụ ọnwụnwa iji mmụba nke olu iji mesie okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ike, olu nwere ọgụgụ isi karịa ndị ọkachamara ga-amata otu esi eji akụkụ dị iche iche nke olu ha, dị ka cadence ma ọ bụ ụda, ime otu ihe ahụ. Ngwa a mechara agaghi ada ezigbo aka nwere otutu ihe ndi ozo.
Olu O doro anya / Diction
Doo anya dị mkpa n'ụdị olu ọ bụla, n'ihi na onye na-ege ntị kwesịrị ịghọta mkpụrụokwu niile - ọ bụrụ na ọbụghị mkpụrụokwu niile dị mkpa iji wega ozi ahụ, ha agaghị anọ na edemede ahụ. Ihe dị iche n’etiti ịnụ okwu olu na-eme omume na mmegharị ahụ bụ nke doro anya na ndị na-ege ntị enweghị ike ịhụ ọnụ onye na-eme ihe olu na-agagharị, nke bụ akụkụ nke otu anyị si aghọta okwu, yabụ usoro a ga-abụ ihe na-adịghị mma.
Ọ dị mfe nghọta mgbe ị na-anọgide na-akparịta ụka bụ n'ezie nkà, na sayensị nke na-eme ka ndị na-ese ihe mara ụda mara mma. Na-ekwu okwu ọsọ ọsọ ma ụfọdụ nghọta doro anya furu efu, mana ị na-ekwukarị okwu na-ebelata.
Dịka ị pụrụ ịhụ, akụkụ dị iche iche nke olu karịa usoro na-agakarị, na sayensị nke itinye ha niile n'ime akụkọ na-ada ụda ọkachamara nwere ike ịbụ aghụghọ. Nweta ya n'ụzọ ziri ezi, agbanyeghị, na ike olu ga-enwe mmetụta na ime ka ozi gị gafee!
Tags: ikikedoo anyaọkọwa okwumccoy nwetaraụdaolu olukwuo okwuụda oluolu
Sep 6, 2016 na 10: 40 AM
Oh oke .. m nwetara nnukwu ihe ọmụma site na ebe a banyere sayensị nke olu .. N'ihi na m na-enwe mmasị na olu ndị na-eme ihe nkiri na m na-eso ha site na nwata .. Ọ bụ mmasị m ịnakọta ihe ọmụma banyere olu .. Achọrọ m -aburu a ma ama olu n'elu omee .. Daalụ maka ịkekọrịta nnukwu ozi a ..